I-Semalt: Izikhwama ze-Python Nezakhi ze-Web Scraper
Ezweni lanamuhla, umhlaba wesayensi nobuchwepheshe, wonke Idatha esiyidingayo kufanele ifakwe ngokucacile, ifakwe kahle futhi itholakale ekulayisheni okusheshayo. Ngakho-ke singasebenzisa le datha kunoma iyiphi inhloso noma kunini lapho sidinga khona. Nokho, ezimweni eziningi, ulwazi oludingekayo luboshwe ngaphakathi kwebhulogi noma isayithi. Ngenkathi amanye amasayithi enza imizamo yokwethulwa kwedatha kwifomethi ehlelekile, ehlelekile nehlanzekile, enye ihluleka ukwenza lokho.
Ukukhahlela, ukucubungula, ukuhlunga nokuhlanza idatha kuyadingeka ebhizinisini le-intanethi. Kufanele uqoqe ulwazi oluvela emithonjeni eminingi futhi ulondoloze kumininingo yolwazi lokuthengisa ukuze uhlangabezane nemigomo yebhizinisi lakho. Ngokushesha noma kamuva, kuzodingeka ubheke umphakathi wePython ukuze ufinyelele izinhlelo ezihlukahlukene, izinhlaka, nesofthiwe yokubamba idatha yakho. Nazi ezinye izinhlelo ezidume futhi ezivelele zePython zokukhipha nokukhwabanisa amasayithi nokuxosha idatha oyidingayo ebhizinisini lakho.
I-Pyspider ingenye ye-Python engcono kunazo zonke ze-web scrapers ne-crawlers ku-intanethi. Iyaziwa nge-interface yayo esekelwe kuwebhu, eyisebenziseka kalula yomsebenzisi eyenza kube lula ngathi ukugcina ithrekhi yezikhawu eziningi..Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo luza nezinqolobane eziningi ze-backend.
Nge-Pyspider ungakwazi kalula ukuzamazama amakhasi wewebhu ahlulekile, ukukhwabanisa amawebhusayithi noma amabhulogi ngaminyaka bese wenza imisebenzi ehlukahlukene. Kudinga nje ukuchofoza kabili noma kathathu ukuze wenze umsebenzi wakho ufeze futhi ukhawule idatha yakho kalula. Ungasebenzisa leli thuluzi emafomini asatshalaliswe nabakhasimende abaningi abasebenza ngesikhathi esisodwa. Ilayisensi yelayisensi ye-Apache 2 futhi ithuthukiswe yi-GitHub.
I-MechanicalYakha umtapo wolwazi odumile owakhiwe emtatsheni odumile we-HTML obizwa ngokuthi i-Beautiful Soup. Uma unomuzwa wokuthi ukukhwabanisa kwakho kwe-web kufanele kube okulula futhi okuyingqayizivele, kufanele uzame lolu hlelo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kuzokwenza kube lula ukuthi inqubo yokuhamba. Noma kunjalo, kungadinga ukuba uchofoze emabhokisini ambalwa noma ufake umbhalo othile.
Isikrini siwuhlaka olunamandla lwe-web ukususa olusekelwe umphakathi osebenzayo onjiniyela bewebhu futhi kusiza abasebenzisi ukwakha ibhizinisi le-intanethi eliphumelelayo. Ngaphezu kwalokho, ingakwazi ukuthumela yonke inhlobo yedatha, ukuqoqa nokuyigcina kumafomethi amaningi afana ne-CSV ne-JSON. Ibuye inezandiso ezimbalwa ezakhiwe ngaphakathi noma ezenzakalelayo ukwenza imisebenzi efana nokusingathwa kwekhukhi, ama-spoofs e-agent yomsebenzisi, kanye nabanqamuleli abavinjelwe.
Uma ungakhululekile ngezinhlelo ezichazwe ngenhla, ungazama i-Cola, i-Demiurge, i-Feedparser, iLassie, i-RoboBrowser, namanye amathuluzi afanayo. Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi uhlu aluphelelanga futhi kunezinketho eziningi kulabo abangathandi amakhodi we-PHP ne-HTML.